Olee otú Hichapụ oyiri Songs on iPhone More Mfe
> Resource> iPhone> ụzọ dị mfe iji Hichapụ oyiri Songs on iPhone
"M nwere oyiri songs na ma na kọmputa na iPhone. M mesịrị achọpụtabeghị otú ka ihichapụ oyiri songs si iTunes. Otú ọ dị, ọ bụ nnọọ ihe na-ewe oge ka ihichapụ oyiri songs on iPhone otu otu. Bụ n'ebe ọ bụla ụzọ dị mfe ka m ihichapụ oyiri songs on iPhone na ogbe? "
Ọ dịghị onye na-enwe mmasị oyiri songs on iPhone, ọ bụghị n'ihi na ọ na-ewe a otutu ohere, na-anọkarịrị n'ihi na ọ ga-emetụta gị na ọnọdụ na-ekpori music. Ị nwere ike ihichapụ oyiri songs on iPhone site swiping site n'aka ekpe gaa n'aka nri na taping Hichapụ. Nke a bụ mfe ụzọ ka ihichapụ oyiri songs si iPhone ma ọ bụrụ na ị naanị erughị 10 songs ka ihichapụ. Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nke oyiri songs ka ihichapụ on iPhone, ọ ga-ewe gị awa. Na-esonụ, anyị ịme ka ị ụzọ dị mfe ka ihichapụ oyiri songs on iPhone na ogbe.
Download TunesGo. Ma MoblieGo maka iOS (Windows) na TunesGo (Mac) dị. Get nri version maka kọmputa gị. Na-esonụ, m na-TunesGo (Windows) dị ka ihe atụ iji gosi gị otú ị ka ihichapụ oyiri songs on iPhone.
Nzọụkwụ 2. Ngosipụta iPhone songs na a Ohere
Jikọọ gị iPhone na PC site eriri USB na ẹkedori TunesGo. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na Windows PC. Na MobileGo akwado ndị ọhụrụ iPhone 5s na iPhone 5c na ndị ọzọ na iPhones na-agba ọsọ iOS 7. Mgbe ịchọputa gị iPhone, TunesGo maka igosipụta gị iPhone ke akpan window. Pịa Media na ekpe kọlụm, ị ga-ahụ niile songs na-egosipụta na Music Ohere.
Cheta na: Tupu imalite iji TunesGo, ị kwesịrị ị wụnye iTunes na PC gị na mbụ. Ma, TunesGo nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma.
Nzọụkwụ 3. Hichapụ duplicated songs si iPhone
Pịa "ndepụta View" ele songs na ndepụta. Site ndepụta, ị pụrụ ịhụ oyiri songs mfe. Ego igbe tupu oyiri songs> Pịa "Hichapụ" n'elu nke mpio.
Na TunesGo, ị ga-ele na ihichapụ oyiri songs si iPhone anya. Na ihe bụ ihe ọzọ, ma ọ bụrụ na ị na-enwetatụbeghị ụfọdụ songs si isi mmalite ndị ọzọ maka iPhone, i nwere ike iji TunesGo nyefee ndị a iPhone songs ka iTuneswithout oyiri n'anya. Ọ bụrụ na ndị song ị na-aga nyefee iTunes ka e kee, mgbe ahụ iTunes na akara ngosi na TunesGo window ga-pụta ìhè.
Gbalịa Wondershare TunesGo ka ihichapụ oyiri songs si iPhone na ogbe!
Watch Video ịmụta otú Hichapụ oyiri Songs on iPhone